कञ्चनपुर हत्या प्रकरण : समितिका सदस्य केसीले यसकारण राजीनामा दिएकाे उनकै सहकर्मीले गरे सनसनीपूर्ण खुलासा, गृहमन्त्री थापाकाे गयाे साताे! -
कञ्चनपुर हत्या प्रकरण : समितिका सदस्य केसीले यसकारण राजीनामा दिएकाे उनकै सहकर्मीले गरे सनसनीपूर्ण खुलासा, गृहमन्त्री थापाकाे गयाे साताे!
२६ भाद्र २०७५, मंगलवार ०८:२७ 679 पटक हेरिएको
काठमाडाैँ । कञ्चनपुर निर्मला पन्त हत्याको अनुसन्धानका लागि गठित उच्चस्तरीय छानबिन समितिका सदस्य बीरेन्द्रबहादुर केसीले राजीनामा दिएका छन । प्रदेश ७ का आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका उपसचिव समेत रहेका केसीले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै समितिको सदस्यबाट राजीनामा दिएको घोषणा गरेका हुन् ।
केसीले छानबिनबारे थप भएको म्यादमा असन्तुष्टि जनाएका छन् उनले भने, ‘ निर्मलाको न्यायका लागिनै मैले राजीनामा दिएको हुँ । म्याद थप गरिएकोमा मेरो असन्तुष्टि हो । अब म समितिमा बसेर काम गर्दिनँ ।’
वास्तविक अपराधी पहिचान गरी न्यायिक कठघरामा उभ्याईनेमा आफू पहिले विश्वस्त रहेको सुनाउँदै उनले भने, ‘वास्तविक अपराधीलाई पहिचान गरी न्यायिक कठघरामा उभ्याईनेछ भनेर म प्रति दिन २० घण्टाको दरले छानबिन कार्यमा तल्लिन रहें । तोकिएको १५ दिनको समयावधिभित्रै प्रतिवेदन पेश गर्ने उद्देश्यका साथ प्रतिवेदनको मस्यौंदा तयार पारे । डिएनए टेष्टको कम्प्लिकेशन र १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेश नगरेमा हुनसक्ने सम्भावित दुर्घट्ना र अपराधी उम्कन सक्ने सम्भावनाबारे समितिसमक्ष बारम्बार आफ्ना धारणा राख्दै आएँ । मेरा धारणा र तथ्य ओझेलमा पर्नसक्ने सम्भावना देखेर जिम्मेवारीबाट हटेको जानकारी नेपाल सरकारसमक्ष पेश गर्न समितिका संयोजकमार्फत २०७५ भदौ १८ गते नै निवेदन पेश गरें ।’
केसीले विज्ञप्तिमार्फत भनेका छन्, ‘नेपाल सरकारको मिति २०७५ भदौ २४ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार २०७५ भदौ २५ गतेदेखि लागु हुने गरि १५ दिन म्याद थप गरेको पत्र प्राप्त भएकोले यस सन्दर्भमा निर्मला पन्तको बर्वरतापूृक जघन्य अपराधको विरुद्धमा उभिई निर्मलाको आत्मालाई र निजको परिवारलाई यस समितिको सदस्यबाट न्याय दिन मेरो तर्फबाट असम्भव देखेर आज मिति २०७५ भदौ २५ गतेदेखि समितिबाट अलग रहेको व्यहोरा नेपाल सरकार, प्रदेश नम्बर ७ सरकार लगायत सम्बन्धित निकायहरुलाई जानकारी गर्दछु ।’
उनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘घट्नाको छानबिनको क्रममा सत्य, तथ्य प्राप्त गर्ने र मुख्य अपराधी पत्ता लगाउन लागि पर्ने अठोटसँगै आफू क्रियाशील रहँदा मेरो ज्यान जोखिममा रहेको र शक्तिशाली अपराधीबाट मलाई जुनसुकै समयमा पनि हत्या गर्न सक्ने प्रवल सम्भावना रहेकाले, नेपाल सरकार, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, युनाईडेट नेशन ह्युम्यान राईट्स अफिस अफ द हाई कमिशन, मानवअधिकार सम्बद्र्धन तथा प्रबद्र्धन गर्ने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्था, सञ्चार जगत नागरिक समाज र राजनीतिक दल लगायतलाई मेरो जीवन रक्षाको लागि सहयोग गरिदिन हार्दिक आग्रह गर्दछु ।’
केसीले राजीनामा गरेको सुनेपछि उनका सहकर्मीहरू पहिल्यै त्यसको पूर्वाभ्यास पाएको बताउँछन् । नाम उल्लेख गराउन नचाहने एकजना अधिकृतले दिएको जानकारीअनुसार केसीले ‘आफूमाथि जे पनि हुनसक्ने’ भनेका थिए । तीनजना डिआइजी सम्मिलित छानविन समितिमा उनको फरक मत रहेको हुनसक्ने उनका ती सहकर्मीले बताए । ‘मलाई यो केसमा केही लिनुदिनु छैन, लटरपटर गरे भने म केहीमा पनि हस्ताक्षर गर्नेवाला छैन,’ उनले भनेका थिए ।